Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta ukusinda kwezinyoni ezifudukayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kwenza ushintsho amaphethini wokufuduka wezinyoni eziningi ezifudukayo. Izinguquko emazingeni okushisa emvelo, intuthuko ezikhathini zonyaka, njll. Benza izinyoni zishintshe ukunyakaza kwazo.
Lezi zinguquko ezifudukayo ezisuselwa ekuqhubekeni, ekubambezelekeni noma ebangeni zingaba nemiphumela emibi ekusindeni kwezinhlobo ezithile. Kungani lokhu kwenzeka?
1 Izinguquko emaphethini wokufuduka
2 Izinyoni ezifudukayo kanye nokuguquka kwesimo sezulu
3 Izinguquko ekufudukeni nasekuthuthukisweni okusimeme
Izinguquko emaphethini wokufuduka
Ukuguquka kwesimo sezulu kuletha intwasahlobo ezingxenyeni eziningi zomhlaba. Kungakho izinyoni zenza uhambo lwazo lokufuduka emasontweni adlule, ngoba zibona ukuthi amazinga okushisa asevele emnandi ngokwengeziwe ukuba akwazi ukuphila futhi aqale izikhathi zawo zokuzala.
Kwenziwe isifundo esihlaziya ushintsho emaphethini wezinyoni ezifudukayo nokuthi zingakuthinta kanjani ukuphila kwazo. Ucwaningo lukhombisa lokho U-15% wezinhlobo ezibalelwa ku-1.800 zezinyoni ezifudukayo emhlabeni zisengozini yokuqothulwa. Izizathu ezisobala yilezi: ukuzingela ngokungemthetho, ukulahleka kwezindawo zokuhlala kanye nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Kumele sikhumbule ukuthi ukulungisa okwenziwa ngabantu ezindaweni zemvelo kubeka engcupheni futhi kubhubhise izindawo zokuhlala zalezi zinhlobo zezinyoni ezifudukayo. Izinyoni ezifudukayo zidinga ukuhamba ukuze zithole izindawo ezifanele zokukhiqiza nokuzala kwazo.
Emhlabeni jikelele kunezinhlobo zezinyoni eziyi-10.000 1.800 kanti kulezi, eziyi-XNUMX XNUMX yilezo ezidinga ukuhamba ngakho-ke ziyizifuduko. Le mininingwane ihloselwe ukukhuthaza ezemfundo nokuqwashisa umphakathi ngesidingo sokuvikela lezi zinyoni nezindawo zazo zokuhlala.
Izinyoni ezifudukayo kanye nokuguquka kwesimo sezulu
Njengoba ngishilo ngaphambili, ukuguquka kwesimo sezulu kubanga amazinga okushisa akhuphukayo nezikhathi eziqhubekela phambili. Yingakho iphoqe izinhlobo eziningi zezinyoni ukuba zishintshe indlela ezihamba ngayo. Kubaphoqe futhi ukuthi bashintshe izindawo abazalela kuzo, ezinye izinhlobo ukushintsha izikhathi zabo zobusika kanye nezinye ukunciphisa isikhathi sokufuduka kwabo. Ekugcineni, lezi zinguquko ziyabeka ukusinda kwezinhlobo eziningi ezifudukayo kusengozini.
Yize imiphumela emibi yokushintsha kokuziphatha kwezinyoni ingacaci ngokuphelele, imiphumela icacile. Izikhathi eziningi lezi zinguquko zisho ukuthi izinyoni azixhumanisi umjikelezo wazo wokuphila nokudla ezikudlayo. Lokhu kungadala izinkinga uma kukhulunywa ngokuthi kube nempumelelo engcono noma embi kakhulu yokuzala.
Lesi simo siba sibi kakhulu futhi sibe nemiphumela emibi kakhulu ezinyonini ezincane, njengezinkonjane, ezifinyeza isikhathi sazo sokufuduka. Lokhu kuncishiswa kungenxa yesimo sezulu esibi nokuguquka kwesimo sezulu kuthinta lonke uchungechunge lwezinto eziphilayo zezinyoni, ngoba izinyoni ezidla izinyoni nazo ziphoqeleka ukuba zishintshe izindlela zazo zokuzingela.
Izinguquko ekufudukeni nasekuthuthukisweni okusimeme
Ukukhuthaza intuthuko esimeme kanye nokongiwa kahle kwezinyoni ezifudukayo nezingafuduki, kwenziwa umzamo wokukhuthaza ukuqwashisa okusiza ubudlelwano phakathi kwabantu nemvelo ukuze izinyoni zigcinwe kahle ngoba sihlanganyela iplanethi efanayo futhi izinsiza ezifanayo ezilinganiselwe. Iphinde izame ukudonsela ukunakekela esidingweni sokuphathwa okusimeme kwemithombo yemvelo ngokulungela izinyoni nekusasa lesintu.
Kufanele sikhumbule ukuthi ukufuduka kwezinyoni wuhambo oluyingozi kakhulu futhi kuveza izilwane ezikwenza kube yizinsongo eziningi. Eziningi zalezo zisongo zidalwa yimisebenzi yabantu. Kungakho kudingeka umzamo omkhulu kohulumeni, ama-NGO kanye nawo wonke umuntu onentshisekelo yokonga izinyoni ukuqinisekisa imizila yezinyoni ezifudukayo. Ngale ndlela bazoba nomthelela omncane ohambweni futhi singaqinisekisa ukuthi bayasinda.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta ukusinda kwezinyoni ezifudukayo